Trade Order Types - Online Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolTrade Order Izinhlobo
Lena sihloko ngalolu izinhlobo oda ezivame kakhulu litholakale MT4 platform nendlela ukuwasebenzisa kahle. Sizohlola kafushane oda zinhlobo ezilandelayo:
Oda Market (Ukwenza Instant ne Vala Order)
Misa Order (Thenga Stop, Thengisa Stop)
Umkhawulo Order (Thenga Umkhawulo Order, Thengisa Limit Order)
Iphuma Standard: Misa Ukulahlekelwa futhi Thatha inzuzo
Sizobe efanekisa indlela futhi isizathu usebenzisa uhlobo ngalunye, kanye nabangane babo izinzuzo kanye nobubi obuthile.
Umyalelo emakethe, owande kakhulu oda, isetshenziswa uma ufuna akhiphe umyalo ngokushesha intengo emakethe, okuyinto noma ukhonjiswe"Ibhidi" or "Buza" Intengo esikrinini sakho. Uma uya ukuthenga pair lwemali, uyoba ukuthenga "Buza" intengo, futhi uma uya ukuthengisa lwemali, ngeke adayise ngesikhathi "Ibhidi" Intengo.
Ithiphu: Wonke ama-oda zingafakwa ngezindlela eziningi
Ungakwazi uhlolisise uchofoze noma kwesokudla uchofoze pair lwemali Market Buka iwindi.
Ungasebenzisa Amathuluzi / Umyalo omusha.
Ungachofoza ishadi lwemali, Ukuhweba / oda elisha kwesokudla.
ngokuvamile STP or ECN Abathengi, izingcaphuno ozibonayo zisakazwa kuwe njengamanani angathengiswayo (ibhidi elihle kanye nokunikezwa) okuqoqwe kusuka ku-10 noma ngaphezulu amabhange aphezulu. Uma unquma ukuvula noma ukuvala isikhundla, i-oda lakho lizokwenziwa ngentengo engcono kakhulu etholakala emakethe ngokuqondile kubanikezeli bezimali.
Kuye indlela broker uye wamisa kokubulawa ubuchwepheshe babo, ukuze imakethe yakho izobe ekhiqizwa njengoba kungaba Ukwenza i-Instant or Market Ukubulawa. Uyini umehluko? An ukubulawa osheshayo broker ikuvumela ukuba ubeke ukulahlekelwa stop futhi uthathe inzuzo ngesikhathi esifanayo njengoba oda imakethe yakho, kuyilapho kubulawa emakethe broker has wena beka oda emakethe kuphela, ngaphandle kokuqala stop ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo. Kuphela emva oda kubulawa Ungayaphi wena emuva futhi ukuguqula oda ukufaka ukulahlekelwa stop futhi uthathe inzuzo. Ungazi kanjani wawahlukanisa? Uma ifasitela emakethe oda, ungakwazi ngokushesha ubone umehluko.
Oda Market njengoba Ukwenza i-Instant:
Ungabona lapha kule ongakhetha iwindi ukushintsha ivolumu, okungukuthi, zingaki inkatho ufuna ukudayisa (kulesi sibonelo, 0.01 = 1 lot micro), inketho ukuguqula ukulahlekelwa stop futhi uthathe inzuzo (umqondo wokuqala), futhi Yebo, lithi Ukubulawa okuzenzakalelayo Type field (umqondo wesibili, ezisobala). Ukukwazi ukhombise ukulahlekelwa yakho stop futhi uthathe inzuzo ngesikhathi esifanayo njengoba oda lakho kungaba Ukugunda kakhulu. It okusindisayo nasenkathazweni enezela kubo kamuva, lapho ubungeke kufanele ukwenze uma nje kwadingeka emakethe kokubulawa uhlobo broker. Nezinye izici oda emakethe ukuba icatshangelwe. In the isibonelo ngenhla, uma uya ukuthenga pair lwemali, uyobe ukuthenga cela (US) price, okuyinto ungakwazi ngeso lengqondo njengoba blue Thenga ibhokisi, futhi ungakwazi ukubona lokhu intengo njengoba blue umkhaza shadi the ishadi window. Futhi uma uya ukuthengisa lwemali, uyobe uthengise ngaso intengo ibhidi (Thengisa), okuyinto ungakwazi ngeso lengqondo njengoba obomvu Thengisa ibhokisi, futhi ungakwazi ukubona lokhu intengo njengoba obomvu ishadi umkhaza. Phawula futhi ukuthi ungavumela ukuphambuka esiphezulu kusukela intengo ocashunwe. Uma wabonisa Pips 5 njengoba ukuphambuka wakho oyifunayo, bese okuningi oda lakho ngangokunokwenzeka ziyogcwala akukho Pips ezingaphezu kuka 5 kusuka wamanje. Uma intengo ngokungazelelwe iqhubekela okungaphezu kwalokho, oda ngeke zigcwaliswe. Inzuzo nansi kokulawula slippage futhi Price Ukuqinisekisa.
Oda Market njengoba Market Ukubulawa:
Previous, sibheka indlela ukukhishwa okusheshayo broker ukunika ikhono ukwengeza ukulahlekelwa stop noma ukuthatha inzuzo eceleni oda emakethe. Inzuzo kuleyo ndlela isivinini kanye lula. Ngenhla isibonelo kubulawa emakethe broker okuvumela ukuthi ubeke kuphela umyalelo wamakethe, ngaphandle kokukwazi ukubeka ukulahlekelwa kokuyeka noma ukuthatha inzuzo. Phawula indlela ukulahleka kokuyeka futhi uthathe amabhokisi enzuzo abhekwa ngaphandle, okusho ukuthi ungayisebenzisa nge-oda lomakethe. Enye impikiswano kulolu hlobo broker siwukuthi awuzwani Ungasetha ukuphambuka esiphezulu e Pips kusukela intengo ocashunwe ufuna akhiphe ngaso. Elithola lolu hlobo broker ngukutsi ngokuvamile exhumene kuze STP or ECN ubuchwepheshe imizila oda ngqo ibhidi engcono / ukubuza amanani lomhlinzeki zezimali, esikhundleni umenzi emakethe broker ukuthatha ngakolunye uhlangothi ukuhweba futhi ngenxa yalokho ekuletheni esingaphansi amanani ekahle noma ukukhishwa ngesivinini.
Buhle ukuze oda Market (noma osheshayo noma emakethe ukubulawa)
Umyalelo emakethe ucela zibhujiswe ngokushesha, futhi lokhu kuyinto enhle uma nakanjani ufuna ukuba ukuhweba manje, Ngaphandle kokulibala.
Ngenxa iyashesha ukubulawa kubaluleke kakhulu, ama-oda emakethe kukhona ifomu ethandwa kakhulu lokungena imisebenzi.
Ngenxa zezimali Forex, oda emakethe ngokuvamile zigcwele at ibhidi yakho ocashunwe bese ubuza amanani, kanye slippage ubuncane, kabusha quote futhi iphutha.
Nebubi ukuze oda Market
Ngezinye izikhathi i-oda emakethe luyakwazi uhlushwa slippage futhi kabusha quote ngezikhathi ngokujulile oluyingozi, ezifana ezenzeka ngesikhathi esibucayi izindaba saziso. Ungase kabusha ocashunwe intengo, akungenxa yokuthi broker uzama ngenhloso isikulufa nawe, kodwa ngoba intengo emakethe wamanje kungenzeka ngokushesha selishintshile zinyanga emakethe isifinyezo.
Izikriphthi Cool Ukuze Vula oda Market okusheshayo:
Ungakwazi ukusizakala eziningi izikriphthi ungathumela oda emakethe sakho yakho MT4 ngokushesha kunokuba uvula ibhokisi oda iwindi futhi ngesandla ufaka umthamo osithandayo, ayeke ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo amazinga intengo. Steve Hopwood idale Thenga uthengise emakethe ukuze izikripthi ezikuvumela kalula oyifisayo izinto ezimbalwa ezengeziwe emakethe oda lakho bhukwana, ngaphezu lula ukudonsa kalula iskripthi ngaphesheya ishadi ewindini lakho ezokhipha oda emakethe:
Setha usayizi okuningi
Setha stop ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo, njengoba kungaba intengo noma Pips
Setha inani magic
Vala Market: Ukuvala Trades Ngezinye Market
Ukuvala umsebenzi wezandla e-emakethe kuyindlela esheshayo ye kokuphuma trade ngaphandle kokulibala.
Ukuze senze kanjalo, kudingeka silungise uchofoze oda evulekile kusuka ngaphakathi Terminal, bese ukhetha Vala Order.
Ibhokisi elivela ubukeka kakhulu afana esheshayo Ukubulawa Ibhokisi, kodwa manje kukhona ibhokisi eligqanyisiwe ophuzi ngokuthi Vala #xxxxx ukuthenga 0.04 EURJPY at 112.1000. I wacaphuna intengo eduze iyona ibhidi ocashunwe (Ukuthengisa / obomvu) intengo uma oda evulekile kwaba Thenga, futhi le ocashunwe iyabuza (ukuthenga / okwesibhakabhaka) intengo uma oda evulekile kwaba ukuthengisa. Uma ucindezela lokhu kubha ephuzi, ithikithi i-oda yakho izobe kweso ivaliwe intengo emakethe wamanje. Le ntengo eduze ocashunwe igcina izibuyekezo ngomzuzwana amanani amasha, ngakho-ke ungagcina ivuleke bese ake amanani ukuthuthela lapho ufuna ngaphambi kokuthi ucindezele ibha.
Cool Amaskriphthi Ukuze Vala Trades okusheshayo:
Ungakwazi ukusizakala eziningi izikriphthi ungavala imiyalo yakho ngokushesha kunokuba ngenye indlela. Hudula izikripthi ngezansi amaskripthi ifolda phezu ewindini ishadi ukuvala out abathengisa zakho emazingeni wena ufisa.
I-Pipsing_Close_on_Drop.mq4 Nice! Beka iskripthi eduze ukuvula ukuhweba yeshadi (ngeke kubonakale njengendlela oluhlaza ovundlile kunodeshi umugqa).
Vala_all.mq4 Kuvalwa yonke imisebenzi.
CloseAtEquityAmount_v1.0_Above.mq4 Kuvalwa abathengisa lapho nokulingana> X
CloseAtEquityAmount_v1.0_Below.mq4 Kuvalwa abathengisa lapho nokulingana <X
ValaTrades_After_Account_Loss_TooMuch.mq4 Kuvalwa ukuhweba lapho kutheleka okulahlekile> - X
ValaTrades_After_Account_Loss_Percent.mq4 Kuvalwa abathengisa ngesikhathi amaphesenti ukulahlekelwa
ValaTrades_AfterAccount_Profit_Percent.mq4 Kuvalwa abathengisa ngesikhathi inzuzo amaphesenti
Ngokungafani oda emakethe ukuma oda elilindile, oda ofuna zigcwaliswe ngentengo esibekiwe, phambili noma emuva kusukelwa isiqondiso yakho ehlosiwe.
Kunezinhlobo ezimbili zama-oda okulindile: Misa oda futhi Umkhawulo oda.
Okulindile stop noma umkhawulo oda eze ngesimo okufakiwe abizwa ngokuthi kulindile stop entry oda noma elindile stop umkhawulo oda. Misa oda entry kuthiwa oda igcwaliswe phambili okuhloswe intengo isiqondiso yakho (ukuqinisekisa intengo isiqondiso), kanye nomkhawulo oda entry kukhona oda igcwaliswe ukubuyela emuva retracement yesikhashana senzelwe intengo isiqondiso yakho (ukungena ngentengo engcono).
Misa futhi Umkhawulo oda ingafika ifomu njengokuphuma. Ukuphuma okuvamile, Misa Ukulahlekelwa, Kuyinto okulindile-stop order, ngenkathi Thatha inzuzo iyinhlangano okulindile umkhawulo oda. Sizohlola lezi ngemva kokuhlanganisa kusaqhubeka oda entry.
Misa oda Entry
A stop order umyalelo ukuthenga noma ukuthengisa lwemali lapho intengo yayo oludlula iphuzu elithile, ukuze kuqinisekiswe okungenzeka mkhulu kakhulu ekufezekiseni predetermined entry noma ukuphuma intengo. Once intengo okudlula achazwe entry / ophumayo iphuzu, oda stop iba oda emakethe.
A buy-stop order iyinhlangano okulindile Thenga ukuze athenge umbhangqwana lwemali ngentengo ecacisiwe ephakeme.
A ukuthengisa-stop order kuyinto okulindile Ukuthengisa ukuze uthengise pair lwemali ngentengo ecacisiwe aphansi.
Ngezansi isibonelo oda Thenga stop kokuba afakwe MT4:
Lapha kulesi sibonelo engikuyala ekhombisa e Uhlobo ensimini ukuthi Umyalelo Pending, esikhundleni Ukubulawa esheshayo, futhi manje kukhona imingcele lenkambu Order Pending, ezifana Uhlobo (kusibonelo ngivezile Thenga Stop), ngentengo ( kusibonelo ngimisé ukuba 1.2838), kanye kwesikhathi (Angazi abonisa kwesikhathi kodwa Ukugunda ukusebenzisa uma Angifuni ukuba abe ukuthenga Yeka obuyohlala phakade). Eshadini umkhaza kwesobunxele, lami esiqokiwe Thenga stop yokungena selivela umugqa grey 10 Pips ngaphezu ibhidi wamanje (blue) lesisho amanani. Imakethe ufinyelela ukuthi intengo Ngigcwele 0.01 eziningi micro.
Misa oda indlela enhle ukusebenzisa ukuhwebelana okuphumayo. Ngokwesibonelo, besebenzisa isibonelo ngenhla, ngisibeké oda EURUSD Thenga stop 1.2838 ngenhla nje zokugcina eliphezulu emakethe ngoba engicabanga ukuthi uma iphula alolu ukumelana, kungaba uqhubeke ukudayisa ephakeme, futhi ngifuna ukuba kule ukuhweba sekungaphezu.
Ukwenza ukuthi ukhona kokwe ku ukuhweba uma ihamba esiqondisweni yakho okubhekiwe
Okuhle Ngomsebenzi ekubambeni okuphumayo
Ngenxa emakethe ine ukuhambisa izindlela phezulu noma phansi ngaphambi kokuthi ungene ku isikhundla, kukhona ingozi kini abangena ekupheleni run noma ukukhathala iphuzu
Kunezindlela eziningana abahwebi bayathanda fade okuphumayo, okusho ukuthi babeka imiyalo umkhawulo kolunye uhlangothi yemiyalo yakho stop, nginethemba lokuthi le ukumelana naso futhi kwenze support lisiphatheleni esikhundleni amakhefu
Umyalelo umkhawulo ibekwe uma uzimisele kuphela ukungena isikhundla esisha noma ukuphuma sesimweni zamanje ngentengo ethile noma kangcono. I-oda umkhawulo, uhlezi ngezansi emakethe ukuba ukuthenga, noma ngaphezulu ukuze sell, kuzobalwa kuphela egcwele uma abathengisa emakethe ngaleso intengo noma kangcono.
A nomkhawulo-ukuthenga oda i-oda elindile ukuthenga pair lwemali ngentengo ecacisiwe aphansi.
A umkhawulo ukuthengisa oda i-oda elindile ukuthengisa pair lwemali ngentengo ecacisiwe ephakeme.
Ngezansi isibonelo ukuze umkhawulo-Thenga e MT4:
Ngimbeke Thenga Umkhawulo oda 1.2858, 7 Pips ngezansi wamanje emakethe Thenga intengo 1.2866. Ngithemba emakethe aqala kancane phansi phambi Ngigculisekile ukuze uthole 7 PIP inzuzo sendleleni phezulu. Uma Ngangifuna iDemo ukuhweba, ngingaba ethengisa umkhawulo setha kuphi ngenhla intengo ethengisa ocashunwe ukusizakala amanani angcono ku Ukuthutha phansi.
Okuhle Ngomsebenzi nigcwaliswa ngamanani ungcono emakethe noma stop oda.
Okuhle Ngomsebenzi lantambama okuphumayo
ithuba Uphuthelwe: Ngezinye izikhathi intengo awufiki phezulu noma phansi ukuze umkhawulo oda lakho, futhi wena miss yokuhamba uma emakethe ihamba kakhulu esivuna isiqondiso yakho ehlosiwe.
Ukubeka ethengisa wakho loba uthenga umkhawulo ezingeni ukumelana noma ukwesekwa ungahlangana nezinkinga lapho labo amazinga aphule. Wena Kanjalo engena esimweni lapho emakethe mkhuba ihamba kuwe.
Izikripthi ezitholile zokufaka ama-oda wokungena okulindile Ngokushesha:
Iningi oda entry kulindile zivulwa nge-oda inqubo 5 isinyathelo:
Vula oda elisha ifasitela
Khetha Uhlobo: Order okulindile
Khetha Uhlobo: Thenga Umkhawulo, Thengisa Umkhawulo, Thenga Stop, Thengisa Stop
Khetha Inani Specific
Le nqubo ingathatha imizuzwana embalwa, kodwa okujabulisayo kukhona izikriphthi oda oda okulindile ngokushesha.
Ngiligijimile yonkana iskripthi cool ukuthi ungafaka stop lokungena lakho noma umkhawulo oda entry ngokushesha okuningi kunalokho indlela ejwayelekile. Usanda hudula iskripthi ngezansi amaskripthi ifolda phezu kushadi ngenhla noma ngezansi intengo wamanje, kuye uma ufuna okulindile uhlobo ofuna ukuthi kube:
DROP_PENDING_BUY Beka phezu kwentengo stop ukuthenga, ngaphansi intengo umkhawulo Thenga
DROP_PENDING_SELL Beka ngaphansi intengo stop sell, phezu kwentengo umkhawulo sell
DROP_MOVE_PENDING_PRICE Beka phezu / ngaphansi intengo ukuhambisa stop / umkhawulo kuze kube yileso sikhathi
Standard Iphuma: Stop Loss Futhi Thatha inzuzo
Ukulahlekelwa stop futhi uthathe inzuzo kuyizinto amafomu amabili ezivame kakhulu kweminyango okulindile futhi ngokuvamile ezakhelwe amapulatifomu kakhulu ukuhweba njengoba okokufaka ngokwezifiso.
Ngeshwa ebhokisini ukuze efasiteleni MT4 ekhombisa ayeke ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo njengoba ngezifiso intengo amazinga (hhayi Pips). Ngisho uma ufuna ukushintsha i sl ekhona noma tp, it has ukuba kwenziwe ngenani (hhayi Pips). Ngaphezu kwalokho, kuthatha izinyathelo okungenani ezimbalwa ukufaka futhi ushintshe sl futhi tp, okungaba imizuzwana kancane kakhulu emakethe okusheshayo ezihambayo.
Ngenhlanhla, kukhona imibhalo uthole izindlela ezahlukene ngokungeza sl noma tp (njengoba intengo futhi Pips negundane amathonsi) nokulungisa kwabo amazinga akhona epheshaneni, ngokuchofoza kabili sl noma tp imigqa evundla phezulu noma phansi.
Misa Ukulahlekelwa: Ukusebenzisa Stop oda Ukuze Ikhipha Trades
Misa oda ezisetshenziswa ukuze isisindo sibekelwe lapho beshonelwe umntwana. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu okulinganisela ukulahlekelwa yakho kweza pre-ezimisele stop order, esivame ukubizwa ngokuthi i stop-ukulahlekelwa.
Ngezansi isibonelo Thenga stop order kokuba isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne ukulahlekelwa stop.
Njengoba ungase ubone, ngiba Thenga Stop Order at intengo 1.2837, ngenhla nje high last, futhi kubonakala njengendlela line grey eshadini umkhaza, 4 Pips ngenhla wamanje Thenga intengo. Ngiphinde wabonisa ukulahlekelwa stop 1.2827, okuyinto selivela umugqa obomvu eshadini umkhaza, 10 Pips ngezansi Thenga stop yami oda. Ngakho, uma emakethe iqhubekela up and ngifikelwa at 1.2837, ukulahlekelwa yami stop azobonakala at 1.2827, mina ngeke alahlekelwe ezingaphezu kuka 10 Pips ngalolo ukuhweba.
Uma trade kuba enenzuzo by inombolo ethile Pips, ngokuvamile umqondo omuhle ukuba bathuthele ukulahlekelwa yakho stop in the isiqondiso nokunenzuzo ukuze bavikele abanye inzuzo yakho. On a isikhundla enenzuzo eside ungakwazi ukuhambisa stop yakho kuze Breakeven noma inzuzo zone, ukuze ukuyilondoloza ithuba kushintsha emakethe ngokumelene isikhundla sakho enenzuzo okwamanje. Ukunquma embundwini inzuzo for lapho kufanele ukuhambisa ukulahlekelwa yakho stop ukuze uvikele isikhundla sakho noma inzuzo kuyinto olukhohlisayo okuyingxenye, ngoba nawe ufuna ukuvumela trade ukuba babe ekamelweni ukuze uphefumule, akhululeke ukuba ukundiza esikhundleni ngaphambi kwesikhathi owayephuma on an ukulungiswa abangelutho .
Thatha Profit: Limit oda For Ikhipha Trades
Njengoba nje kungaba umqondo omuhle ukuba abe i-stop order ukulahlekelwa endaweni ngaphambi kokufaka trade, kuba umqondo omuhle ngendlela efanayo abe target inzuzo endaweni. Umyalelo umkhawulo ikuvumela ukuba uphume emakethe umgomo wakho inzuzo pre-set, ebizwa ngokuthi i-Profit Take.
Njengoba ungase ubone, ngiye Thenga Limit oda isethwe at intengo 1.2873, evele njengoba grey line (nge Ukungena kuso) 3 Pips ngezansi wamanje Thenga lesisho. Ngiphinde wafaka achazwe Misa Ukulahlekelwa of 1.2871, evele line obomvu (nge SL kuso), 2 Pips ngezansi entry yami wayehlose, kanye inzuzo Thatha of 1.2878, evele njengoba umugqa oluhlaza (nge TP kuso). Yiqiniso, ngeke cishe babe limit entry, uyama futhi nalemigomo ebekelwe zisondelene kakhulu, mina am benqwabelana nabo ukuze ngikubonise indlela iziboshwa zizovela eshadini umkhaza.
Cool Izinkomba ukungena Lungisa Stop Loss Futhi Take Profit Faster:
Ukwengeza noma ukulungisa a ukulahlekelwa stop noma ukuthatha inzuzo MT4 kungathatha izinyathelo ezimbalwa namasekhondi. Ngaphezu kwalokho, konke ukuguqulwa kwenziwa kusukela entengo yedwa, okungabangela ukulibaziseka njengoba umuntu ezama ukuzulazula entengo ethile. Siyabonga ukuthi kukhona izikripthi ongazigijima ukungena noma ukuguqula ukulahleka kokuyeka kwakho noma ukuthatha izinzuzo ngokushesha, ngezindlela eziningi: njengamanani, amapayipi kanye nentengo yokudonsa / yokudonsa enezingqimba.
Market eside Steve.mq4 Dala i-oda emakethe ende, bese usetha i-sl & tp njengentengo noma ama-pips; futhi ungangeza inombolo yomlingo nokuphawula
Market dlala by Steve.mq4 Dala i-oda emakethe emfushane, bese usetha i-sl & tp njengentengo noma ama-pips;
futhi ungakwazi ukwengeza inamba magic and comment
modify_stops_DragDrop.mq4 Faka futhi ushintshe ukuyeka ukwehlisa indawo eshadi
modify_take_profits_DragDrop.mq4 Ngeza futhi uguqule uthathe inzuzo ukulahla indawo eshadi
e-MoveSLTPbyMouse.mq4 Shintsha i-sl & tp ekhona ngokuchofoza kabili & ukuhudula imigqa eqondile ye-sl & tp
Susa stop losses.mq4 Ususa yonkhe imitamo ayo yonke imidanti yohwebo ekhona futhi kusalindelwe
Uma sewazi izinhlobo ezahlukene oda (ezimakethe, ayeke, umkhawulo), kanye ukhululeke bezisebenzisa, ungakwazi ukufeza kangcono izinhloso zakho of indlela engcono ukungena kanye uphume ukuhweba. Zikhona izinzuzo nezingozi hlobo oda ngalinye futhi lezi kungaba kuphela kungafundwa ngokuzijwayeza. Ukwazi uhlobo oda kuphela indlela, kungasizi ne kuphi futhi nini - iliphi abona ukuthi lingasebenza kuze ukuhlaziya yakho noma isu ukunquma. Ekugcineni ungase ukhethe uhlobo olulodwa ngokubulawa phezu kwabanye, noma ungase aqashe inhlanganisela nezimo oda izinhlobo ngokuhlobene nezimo zezimakethe.
Standard Iphuma: Misa Nokulahlekelwa Thatha inzuzo
Thatha inzuzo: Umkhawulo oda Ikhipha Trades
Amathuluzi New Order
Ukuhweba oda elisha